Sorona Masina ny 20/06/2021 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 20/06/2021
ALAHADY FAHA-12 mandavantaona — B
ANDRIAMANITRA NO VONJINTSIKA SY ARONTSIKA
Jôb. 38, 1. 8-11
Namaly an’i Jôba ny Tompo tao anatin’ny tafio-drivotra ka nanao hoe: “Iza no nanidy ny ranomasina tamin’ny varavarana, fony izy nivoaka nisavoamboana avy any am-bohoka; raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho, ary ny zavona matevina ho lambam-pandriany; raha nampanaiky azy ny didiko sy nanisy hidy amam-baravarana taminy, ka nilaza taminy hoe: Hatreto alehanao, ka tsy hihoatra, fa eto no hijanona ny fianjonanjonan’ny onjanao”.
Fiv.: Derao ny Tompo fa tsara: eny, mandrakizay ny hatsaram-pony.
Ireo midina an-dranomasina an-tsambo sy manao ny asany eny ambony rano dia mahita ny asan’ny Tompo, ny zava-mahagaga ataony amin’ny alina.
Mitony izy, dia avy ny tadio, ny onja misavoana manakatra ny lanitra dia midina hatrany amin’ny hantsana ny ainy tsy metimety, toy ny ho lasana.
Dia mitaraina amin’ny Tompo fa mijaly, ka afahany amin’ny fahoriany: ny rivo-mahery tonga tsiotsioka, ny alon-drano nitrena sina tampoka.
Faly ireo fa nitony ireny, izy koa tody an-tseranana irîna.
Aoka izy hisaotra ny Tompo tia, mpanao zava-mahagaga ho an’ny olona.
2 Kôr. 5, 14-17
Hankalazaina anie ny Mpanjaka avy amin’ny Anaran’ny Tompo! Fiadanana anie any an-danitra ary voninahitra anie any amin’ny Avo indrindra!
Ry kristianina havana, eo anoloan’ny adim-piainana diavintsika ankehitriny, dia toa very hevitra sy mila ho kivy isika, fa tsy hita intsony izay hifaharana. Eo anefa Andriamanitra, Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra, sy i Jesoa Kristy Zanany tonga hamonjy antsika; koa andeha hiantso Azy amim-pinoana, mba hankahery sy hiaro antsika lalandava Izy.
Valy: Arovinao izahay, ry Jesoa, satria ady manko ny fiainana.
* Manana adidy lehibe hitondra fanantenana sy hamelona ny finoan’ny olombelona ny Eglizy; koa mivavaha ho an’ireo mpitondra isan-tsokajiny ao amin’ny Fiangonana, mba hahaizany mampifantoka amin’Andriamanitra ny ezaka sy ny tolom-piavotana rehetra ataon’ny olombelona.
* “Mahery tsy maody, tsy ela velona”, hoy ny fahendren’ny Ntaolo razantsika, ary “ny hery tsy mahaleo ny fanahy”; koa mivavaha ho an’ireo manam-pahefana sy tompon’andraikitra isan’ambaratonga, mba tsy hanampatra fahefana sy tsy hitompo teny fantatra, fa mba hitandro ny hasina sy ny zon’ny vahoaka.
* Betsaka ireo mijaly sy vesaram-pahoriana ankehitriny noho ny hamafin’ny vidim-piainana; koa mivavaha ho an’ireo tsy ampy fivelomana, ireo maro anaka, ireo tsy an’asa, ireo kamboty, mba hiankinany lalandava amin’Andriamanitra, hahaizany manakambana ny fijaliany amin’ny an’i Kristy; ary hitarihan’Andriamanitra ny olona tsara sitra-po hanamaivana ny fahoriany.
* Misamboaravoara ny fiainan’ny zanak’olombelona ankehitriny, ka toa hadino Andriamanitra, Ilay fototry ny tena fiainana marina; koa mivavaha mba tsy ho revo amin’ny hita maso fotsiny ny olombelona, sy tsy hiantehitra amin’ny herin’ny sainy fotsiny, fa hitodika amin’Andriamanitra vonjintsika sy fiainantsika.
* Mifampivavaha isika iray Fiangonana, mba ho hita soritra eo amin’ny ezaka iarahantsika manao, fa mino sy manantena an’Andriamanitra isika, ka sady mivavaka amim-pinoana sy faharetana, no mikatroka eo amin’ny asa fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny, hahasambatra ny vahoaka amin’ny fiadanam-po avy amin’Andriamanitra.
Tompo ô, jereo amim-pitiavana izahay eto anivon’izao fiainana sarotra sy feno tebiteby izao. Ianao no Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra ka aza avela hanafotra anay ny rivo-dozan’ny fijaliana sy ny fahotana isan-karazany.
Mba raiso, ry Tompo, ity sorom-pifonana sy fiderana ity: ary enga anie hanadio anay ny fahasoavana avy aminy, ka ho sitrakao ny fitiavana atolotry ny fonay.
Tompo ô, nahazo aim-baovao izahay nandray ny Vatana sy ny Ra masin’i Kristy; koa mihanta aminao mora fo: enga anie izao fanompoam-pivavahana feno fitiavana fanaonay izao, ho antoky ny fanavotana anay.